မိန်းကလေးများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်းအံ့မခန်း..... - Achawlaymyar
မိန်းကလေးများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်းအံ့မခန်း…..
မိန်းကလေးများ အထူး ဖတ်သင့်တဲ့ သံပုရာသီး အစွမ်းအံ့မခန်း
သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေပါတယ်။ သံပုရာသီးအခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပွတ်ပေးရင် သွားကို ဖြူစေရုံတင်မကဘူး။ တောက်ပစေပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းတာလည်း ပျောက်စေပါတယ်။ သွားကိုက်နေရင်လည်း သံပုရာရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။
မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်သောက်ဇွန်း) နဲ့ လိမ္မော်ရည်၊ ပျားရည်တို့ကို ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်လောက် လိမ်းရုံနဲ့ သိသာ ထင်ရှား ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မယ်။
အုန်းရည်လေးဇွန်း (စားပွဲတစ်ဇွန်း)နဲ့ သံပရာရည်တို့ ရောစပ်ပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် လိမ်းပေးရင် ဆံပင်ကျွတ်တာ ပျောက်ကင်း စေပါတယ်။
*ဦးရေပြား ယားယံခြင်းနှင့် ဒဏ်ပျောက်ဖို့အတွက်*
ကြက်ဥအကာရည်နှင့် သံပရာရည် (သံပုရာသီးတစ်လုံးစာ) တို့ရောပြီး ဆံနွယ်အမြစ်ကနေ လိမ်းပေးပါ။ တစ်နာရီခန့်ကြာမှ ရေနဲ့ ပြန်ပြီးဆေးကြောပေးပါ။
တစ်လလောက် လုပ်ပေးရုံနဲ့တင် ဦးရေပြားသန့်ရှင်းပြီး ဗောက်၊ ဒက်တို့ ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံးကိုယူပြီး ချေပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာရည် တစ်စက်နှစ်စက်နဲ့ ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတို့ကို ရောစပ်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့ မျက်နှာနဲ့ လက်ကို လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေကို ချောမွေ့ သန့်ရှင်း စေပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ပျားရည်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆီနဲ့ရောပေးပါ။ ပြီးရင် သံပုရာရည်တစ်စက် လောက်နဲ့ ထပ်ရောပြီး လက်တွေ၊တံတောင်ဆစ်တွေ၊ ခြေဖနောင့်တွေနဲ့ ကြမ်းထော်နေတဲ့နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီးရင် ဆယ်မိ နစ်လောက် စောင့်ပေးပါ။
သံပုရာသီးဟာ အရေပြားအလှအပအတွက်အကောင်းဆုံးပေးစွမ်းစေနိုင်တဲ့ သစ်သီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ ဖြင့် ဝက်ခြံနဲ့ ယားနာတွေ ကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့သတ္တိရှိပါတယ်။ မှဲ့ခြောက်တွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ သံပုရာရည်နဲ့သာ လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သံပုရာရည်နှစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)၊ နနွင်းမှုန့် ဇွန်းဝက်ခန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) တို့ကိုယူပါ။ သင်္ဘောသီးစိတ်ကိုချေပြီး ပျော့ဖတ် သဖွယ် ရအောင်လုပ်ပါ။ ယင်းသင်္ဘောသီး ရည်ကို သုံးဇွန်းခန့် ယူပါ။
အားလုံးကို ရောစပ်ပြီး မျက်လုံးကလွဲရင် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို လိမ်း ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာအောင် စောင့်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနဲ့ စ်ဖန် ပြန်ဆေးကြောပေးပါ။
သံပရာသီးအခွံနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ရေနဲ့ ဆေးပေးပါ။ နည်းနည်းတော့ကြာပေမယ့် အရေပြားကို သန့်စင်သွားပြီး တောက်ပြောင်ဝင်း လက်လာ ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ အသားအရေတွေဟာ မှောင်မှောင်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အရောင်အဝါ လင်းလက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ အရည်နဲ့ မျက်နှာမကျန် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ အိပ်ရာမဝင်ခင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ မနက်ကျမှ ရေချိုးပေးပါ။ အရေပြားကို တောက်ပြောင်ရွှန်းလဲ့စေပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။
အိပ်ရတာ စေးထန်းထန်းနဲ့ မအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ချိုးမယ့်ရေထဲ သံပုရာရည်တစ်ခွက်တစ်ဝက်ခန့် ထည့်ပြီး အဲဒီ့ရေနဲ့စိမ်ချိုးပေးပါ။
သံပုရာသီးစိတ် (သို့) သံပရာရည်ကို ရေထဲရောပြီး လက်ကိုစိမ်ပေးပါ။ လက်သည်းမှာ ပေနေတဲ့ အစွန်းအထင်းတွေကို ချက်ခြင်းချေ ချွတ်ပေးသွား ပါလိမ့်မယ်။ပြီးသွားရင် လက်သည်းကို ပြန်ဆိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတောက်ပြောင်လာပါလိမ့်မယ်။
သံပုရာရည်ထဲ လက်သည်း ခြေသည်းကို ဆယ်မိနစ်ခန့် စိမ်ပေးပါ။ ပြီးလို့ရှိရင် ဘရက်ရ်ှနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို ပြန်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနွေး နွေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ ဒီနည်းဟာ လက်သည်းကို သန်စွမ်းစေပြီး တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗင်နီဂါဖြူ ဇွန်းဝက်ခန့်နဲ့ရေနွေးတစ်ဝက်တို့ ရောပြီး ဘရက်ရ်ှနဲ့ တိုက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
သံပုရာရည်တစ်ခွက်စာ (ကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်စာ)၊ သစ်ဂျပိုး(အနံ့အတွက်)၊ သံလွင်ဆီ နှစ်ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ နွားနို့လေးပုံတစ်ပုံ (ခွက်တစ်ခွက်)၊ ရေသန့် (ရေကို သင့်တော်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်၊ အနည်း၊ အများ အရေးမကြီးပါ) တို့ရောစပ်ပေးပါ။
တကယ်လို့ သစ်ဂျပိုး မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် တခြားအနံ့ ပစ္စည်းတို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ နှင်းဆီပွင့်ချပ် တို့ဖြင့်လည်း အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးရော စပ်ပြီးရင်တော့ အဲဒီ့အရည်ကို ခြေထောက်စိမ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားမှ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ (Mild) နဲ့ သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။
တစ်ပတ်လောက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ခြေထောက် အသားအရေဟာ သိသိသာသာချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
*နွေအပူမှာ ချွေးစုနေခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသစ်သီး*
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့နွေရာသီလို ဥတုမျိုးမှာ ချွေးထွက်သက်သာအောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်ပူသက်သာအောင်လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သံပုရာ သီးရည်ကို ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး သောက်ပေးပါ။ သွေးလေလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေရုံမျှမက ချွေးထွက်ခြင်းကိုလည်း သက် သာစေပါတယ်။ သံပုရာသီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ဂလူးကိုစ့်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ချွေးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အေးမြအောင်လည်း စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
၁။သံပုရာရည်ကို သောက်ခြင်းအားဖြင့် မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ပြေစေပြီး လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဖြစ်ပွားတတ် သော အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်တွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊
၂။ သံပုရာရည်ကို သကြားအနည်းငယ်ထည့်ကာ များများ သောက်ပေးပါက အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ အရက်မှ ဖြစ်သော အဆိပ်၊ ဘိန်းမူးလွန်နာ စသည်များကို ပျောက်ကင်းစေသည်။
၃။ ထမင်းစားပြီးနောက် အော့အန်ခြင်း ဖြစ်တတ်လျင် လပ်ဆတ်သော သံပုရာရည်ကို သောက်ရပါမည်။
၄။ သံပုရာရည်ကို သကြားခတ်၍ သောက်ပါက ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆီများ၍ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သည်းခြေအားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်လက် အဆစ် အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်းများ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
၆။ သံပုရာဖျော်ရည်ကို နေ့စဉ်သောက်ပေးပါက အထိုင်အထ လုပ်စဉ် ဖြစ်တတ်သော မူးဝေခြင်း၊ မိုက်ကနဲ ဖြစ်ခြင်း များကို ပျောက်ကင်းစေသည်။
၈။ ယားနာ ပွေးနာ၊ အရေပြားတွင် အမည်းကွက်များ ပေါ်လာခြင်း ၊ အမွှေးများ ကျွတ်ခြင်း ဖြစ်ပါက သံပုရာခြမ်း နှင့် ပွတ် တိုက်ပေးရပါမည်။
၉။ သံပုရာသီး သနပ်ကို ထမင်းနှင့် နေ့စဉ် စားသုံးပါက သရက်ရွက် ကြီးသော ရောဂါကို ပျောက်စေသည်။
၁၀။ သံပုရာရည် နွေးနွေးကို ပျားရည်နှင့် ရောစပ်ကာ တနေ့ နှစ်ကြိမ်မျှ လျက်ပေးပါက လည်ချောင်းနာခြင်းကို ပျောက် စေသည်။
၁၁။ သံပုရာသီးတလုံးကို မီးကျွမ်းအောင်ဖုတ်ကာ လေးညှင်းတပွင့်နှင့် ထည့်ကျိတ်ပြီး သွားဖုံးရင်းတွင် သိပ်ပေးသော် သွားကိုက် သွားနာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
၁၂။ ဆီးဆေးဖြူ ( တိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး ဆေးအမှတ် ၂၁ ) နှင့် သံပုရာရည်ကို ဖျော်၍ သောက်ပေးပါက ဆီးအောင့်ခြင်း ဝေဒနာကို ပျောက်စေသည်။
၁၃။ သံပုရာခေါက်ကို နံနက် ည တကြိမ်စီ ရေနှင့် ကြိုချက်ကာ သောက်ပေးပါက အဖျား ပျောက်ကင်းစေသည်။
၁၄။ သံပုရာခေါက် ၅ ကျပ်သား၊ ရေ ၇၅ ကျပ်သားနှင့် ထက်ဝက်ခန့် ကျို၍ တခွက်စာ (၂ ကျပ်သားခန့်မျှ) တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပေးပါက မပြတ်နိုင်သော အဖျားရောဂါများ ပြတ်သွားနိုင်သည်။
၁၅။ အစာမကြေ၊ လေထိုး၊ လေအောင့်၊ လေပြည့် ဖြစ်နေခဲ့သော် ဂျင်းခြောက်မှုန့် ၂ ပဲ၊ သိန္ဓော ၄ ပဲကို အမှုန့်ထောင်း၍ သံပုရာရည်နှင့် ဖျော်ကာ တနေ့ သုံးကြိမ် သောက်ပေးပါက ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။
၁၆။ သံပုရာဖျော်ရည် ချိုချိုကို သောက်ပေးခြင်း၊ သံပုရာရည် နှင့် ဆားမီးဖုတ်ကို လျက်ပေးခြင်းဖြင့် နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ရင် ခုန်ခြင်း၊ မူးဝေ မောပန်းခြင်း များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။
၁၇။ မူးလျင် သံပုရာသီးကို ရှုပေးပါ၊ ရွဲ့စောင်းသော လေငန်းရောဂါများ၊ အာလေး လျှာလေး၍ စကားမပီသသော သူများ ပုံမှန် သံပုရာသီးတလုံးကို ငုံထားသင့်ပါသည်။
၁၈။ ခေါင်းတွင် ပေါက်တတ်သော ဒက်များ၊ ဘောက်များ ရှိနေပါက သံပုရာသီးအခွံနှင့် ခေါင်းကို ပွတ်တိုက်ပေးရပါမည်။ ယားယံသော နေရာများကိုလည်း ပွတ်တိုက်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် သံပုရာသီးအခွံကို ခေါင်းလျော်ရည်တွင် ထည့် ကာ ခေါင်းလျော်နိုင်ပါသည်။
၁၉။ သံပုရာအစေ့ကို ကြိတ်ကာ ချက်မှာ အုံပြီး ၎င်းအပေါ်၌ ဆန်ဆေးရည်ကို အနည်းငယ် ဆွတ်ဖြန်းပေးပါက ဆီး ရွှင်စေပါတယ်။
၂၀။ သံပုရာချဉ် ပြုလုပ်၍ ထမင်းစားတိုင်း စားသုံးပေးပါက လေကြောင့်ဖြစ်ရသော သွက်ချာပါဒ၊လေငန်း၊ လေထိုး၊ လေအောင့်၊ အစာအိမ်ရောဂါ မှန်သမျှကို ကာကွယ်နိုင်သော အထူးစိတ်ချရသော အာဟာရ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
( ကြည်ကြည်ခင်၊ တိုင်းရင်းဆေး )
စာရေးသူ အထင်တော့ သံပုရာသီးဟာ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ရောဂါမှန်သမျှ၊ လေနဲ့ ပက်သက်တာ မှန်သမျှကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို မမြင်မိသလိုပဲ၊ ချွင်းချက်အနေနဲ့ တနေ့ကို ( ၃ ) လုံးထက် ပိုစား မိရင် တော့ အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်တဲ့အနာမျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
ရှေးရှေးသော ဆရာတော်ကြီးများကတော့ ညနေပိုင်းမှာ သံပုရာသီး( ၁) လုံးနှင့်၊ ပျားရည် ထမင်းစားဇွန်း ( ၃ ) ဇွန်းလောက်ကို ဖန်ခွက်ကြီး တခုထဲမှာ ထည့်ပြီး ရေနွေးအဖြူနှင့် သမအောင် မွှေကာ သကြားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး သောက်လေ့ရှိခဲ့ကြတယ်၊ ရောဂါ မျိုးစုံကို ကာကွယ်နိုင်သလို၊ ညနေပိုင်းမှာလည်း ဗိုက်မဆာတော့ဘူး၊ သံပုရာက လေကို နိုင်သလို ပျားရည်ကလဲ ဝမ်းတွင်းကလီစာများကို ဆေးကုပေးတတ်တယ်၊ စားကောင်း အိပ်ပျော်၊ ဆီးမှန် ဝမ်းမှန် ဖြစ်ပြီး လူကိုလဲ ဝဖြိုးစေတယ်။ အသားအရေကိုလည်း ကြည်လင်စေတယ်။
အထူးသဖြင့် အစာအိမ် သမားများအတွက် ပျားရည်ဟာ အသင့်လျော်ဆုံး ဆေးကောင်းပါ၊ ပျားရည်က အစာအိမ် နာကြောင့် အစာအိမ်နံရံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အနာများကို ကျက်စေပါတယ်၊ စတုမဓူဟာလဲ အစာအိမ်အတွက် တော်တော် ကောင်းမွန် တဲ့ ဆေး စွမ်းတလက်ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိန် လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေသူများ၊ ဝချင်သူများ အထက်ပါနည်းကို ပုံမှန်လေး သောက်ပေး ကြည့်ပါ၊ မယုံမရှိပါနဲ့၊ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ၊ စာရေးသူ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေစဉ်က ညနေပိုင်းမှာ အထက်ပါနည်းကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်လာပြီး ၂ လလောက်လဲ နေရော၊ ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်ချိန်က ( ၂၀ ) လောက် တက်လာလို့ ဆက်မသောက် ရဲတော့ဘူး၊ အစား လျော့ စားပေး ရင်တော့ ကိုယ်အလေးချိန် သိပ်မတက်နိုင်ပါဘူး၊ဝနေသူကို ပိန်စေသည်…..။
၀လွန်းလို့ ပိန်ချင်သူများကတော့ ပျားရည် နှင့် မသောက်ပဲ သံပုရည်သက်သက် သောက်တာ ကောင်းပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် သံပုရာရည်သောက်ပြီးလျင် ဝမ်းဗိုက်အတွင်းက ဟာနေတဲ့ အတွက် ညနေစာကို ဝိတ်ချတာကို သတိမေ့ပြီး စိတ်ကြိုက် စားလေ့ရှိကြပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ဘရိတ်မရှိလေတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ပိန်မလာပဲ ဝမြဲ ဝနေတာ မျိုးဖြစ် တတ် ပါ တယ်၊ အဲဒီလို အစား မလျော့လျင်လည်း စားလိုက်သမျှ အာဟာရက ခန္ဓာကို အကျိုးပြုစေတာမို့ သတိထားစရာပါပဲ၊ အထူးသဖြင့် သံပုရာရည် သောက်ထားလေတော့ ဝမ်းဗိုက်က ရှင်းလင်းထားသလို ဖြစ်ပြီး ပိုစားနိုင်လာတတ်တယ်၊ ဒါဆိုရင်တော့ ရည်ရွယ် ချက်ပြည့်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်၊
အခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ ပိန်ဆေးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတာကို ဆရာဝန်တိုင်းက ထောက်ခံထားကြပါတယ်၊ သံပုရာကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ၊ သံပုရာကို လိုသလို အသုံးချနိုင်ကြ ပါေ စ လို့ တင်ပြရင်း ..
ရောက်လေရာတွင် သံပုရာ ဆောင်ထားလျင် ကျမ္မာပကတိ ချမ်းသာစွာ ရှိနိုင်ပါကြောင်း စေတနာစကား ပါးလိုက် ပါရစေတော့…
မိန်းခလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးဘဲဖြစ်ဖြစ်… အလှအပကို မြတ်နိုးတတ်ကြတာ… သဘာဝပါ… ဒါ့ကြောင့် ဗိုက်ခေါက်ထူ/ဗိုက်ပူပြီး အဆီ များနေသူတွေအတွက်… လက်တွေ့… ၇ ရက်အတွင်း… သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ဆေးနည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
ဆေးနည်းက အလွန်လွယ်ပြီး အကုန်အကျလည်း အလွန်သက်သာပါတယ်… အိမ်မှာရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုရမှာပါ..
ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့… သံပုရာသီး၊ အုံးဆီ၊ ဆေးပူ(ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး) တို့ကို တစ်ခါလိမ်းရုံ… ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးရမှာပါ…
သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ ၅ ပုံ တစ်ပုံလောက်ကို လှီးပြီး… အကြမ်းပုဂံလုံးထဲကို အရည်ညှစ်ပါ…
အကြမ်းပုဂံလုံးထဲသို့ အုံးဆီ သုံးလေးစက်လောက် ထည့်ပေးပါ… ထို့နောက် …. ဂဠုန်ရာဇာ/မိဂသီ/ရှမ်းရိုးမ/လင်ဇီး(လိမ်းထေည့်ဆး)တစ် မျိုးမျိုးကို တစ်ခါလိမ်းစာ အနေတော်ထည့်ပြီး… မွှေပေးပါ…
ဆေးကို ရင်ခေါင်းမှ ဝမ်းဗိုက်သို့ အထက်မှအောက်သို့ ဆွဲချပြီး အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ… ခါးတွင်အဆီရှိပါက ခါးမှ ချက်သို့ ပွတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်…
မှတ်ချက်- ညစာကို ပုံမှန် ထက်… လျှော့စားပေးရင်… ပိုပြီး သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်စေပါတယ်…တစ်ပါတ်အတွင်း သိသိသာသာ အဆီနှင့် အခေါက်များ လျှော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မိနျးကလေးမြား အထူး ဖတျသငျ့တဲ့ သံပုရာသီး အစှမျးအံ့မခနျး
သံပုရာသီးဟာ သှားကို ဖွူစပေါတယျ။ သံပုရာသီးအခှံကိုဆား (တကျောစာ)နဲ့ ရောပွီး ပှတျပေးရငျ သှားကို ဖွူစရေုံတငျမကဘူး။ တောကျပစပေါတယျ။
ခံတှငျးအနံ့ မကောငျးတာလညျး ပြောကျစပေါတယျ။ သှားကိုကျနရေငျလညျး သံပုရာရညျနဲ့ ပလုတျကငျြးပေးပါ။
မကျြနှာလိမျးခရငျမျတဈဇှနျး (လကျဖကျရညျသောကျဇှနျး) နဲ့ လိမ်မျောရညျ၊ ပြားရညျတို့ကို ရောစပျပွီး လိမျးပေးပါ။ တဈပတျလောကျ လိမျးရုံနဲ့ သိသာ ထငျရှား ပြောကျကငျး သှားပါလိမျ့မယျ။
အုနျးရညျလေးဇှနျး (စားပှဲတဈဇှနျး)နဲ့ သံပရာရညျတို့ ရောစပျပွီး တဈပတျတဈခါလောကျ လိမျးပေးရငျ ဆံပငျကြှတျတာ ပြောကျကငျး စပေါတယျ။
*ဦးရပွေား ယားယံခွငျးနှငျ့ ဒဏျပြောကျဖို့အတှကျ*
ကွကျဥအကာရညျနှငျ့ သံပရာရညျ (သံပုရာသီးတဈလုံးစာ) တို့ရောပွီး ဆံနှယျအမွဈကနေ လိမျးပေးပါ။ တဈနာရီခနျ့ကွာမှ ရနေဲ့ ပွနျပွီးဆေးကွောပေးပါ။
တဈလလောကျ လုပျပေးရုံနဲ့တငျ ဦးရပွေားသနျ့ရှငျးပွီး ဗောကျ၊ ဒကျတို့ ကငျးစငျသှားပါလိမျ့မယျ။
ငှကျပြောသီးမှညျ့တဈလုံးကိုယူပွီး ခပြေေးပါ။ ပွီးရငျတော့ လတျလတျဆတျဆတျ သံပုရာရညျ တဈစကျနှဈစကျနဲ့ ခထြေားတဲ့ ငှကျပြောသီးတို့ကို ရောစပျပေးပါ။ပွီးရငျတော့ မကျြနှာနဲ့ လကျကို လိမျးပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အသားအရကေို ခြောမှေ့ သနျ့ရှငျး စပေါတယျ။
နောကျတဈနညျးကတော့ ပြားရညျတဈဇှနျး (လကျဖကျရညျဇှနျး) ကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ဆီနဲ့ရောပေးပါ။ ပွီးရငျ သံပုရာရညျတဈစကျ လောကျနဲ့ ထပျရောပွီး လကျတှေ၊တံတောငျဆဈတှေ၊ ခွဖေနောငျ့တှနေဲ့ ကွမျးထျောနတေဲ့နရောတှကေို လိမျးပေးပါ။ လိမျးပွီးရငျ ဆယျမိ နဈလောကျ စောငျ့ပေးပါ။
သံပုရာသီးဟာ အရပွေားအလှအပအတှကျအကောငျးဆုံးပေးစှမျးစနေိုငျတဲ့ သဈသီးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသ ဖွငျ့ ဝကျခွံနဲ့ ယားနာတှေ ကို ပြောကျကငျးစတေဲ့သတ်တိရှိပါတယျ။ မှဲ့ခွောကျတှကေိုလညျး ပြောကျကငျးစပေါတယျ။ သံပုရာရညျနဲ့သာ လိမျးပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သံပုရာရညျနှဈဇှနျး (လကျဖကျရညျဇှနျး)၊ နနှငျးမှုနျ့ ဇှနျးဝကျခနျ့ (လကျဖကျရညျဇှနျး) တို့ကိုယူပါ။ သင်ျဘောသီးစိတျကိုခပြွေီး ပြော့ဖတျ သဖှယျ ရအောငျလုပျပါ။ ယငျးသင်ျဘောသီး ရညျကို သုံးဇှနျးခနျ့ ယူပါ။
အားလုံးကို ရောစပျပွီး မကျြလုံးကလှဲရငျ မကျြနှာတဈပွငျလုံးကို လိမျး ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ လိမျးပွီး မိနဈ ၂၀ ခနျ့ကွာအောငျ စောငျ့ပေးပါ။ ပွီးမှ ရနေဲ့ ဈဖနျ ပွနျဆေးကွောပေးပါ။
သံပရာသီးအခှံနဲ့ ပှတျပေးပါ။ ပွီးရငျရနေဲ့ ဆေးပေးပါ။ နညျးနညျးတော့ကွာပမေယျ့ အရပွေားကို သနျ့စငျသှားပွီး တောကျပွောငျဝငျး လကျလာ ပါလိမျ့မယျ။ တခြို့ အသားအရတှေဟော မှောငျမှောငျမှိုငျးမှိုငျးနဲ့ ခွောကျခွောကျသှသှေ့ဖွေ့ဈနတေတျပါတယျ။
အရောငျအဝါ လငျးလကျခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ လတျလတျဆတျဆတျ သံပုရာသီး တဈလုံးရဲ့ အရညျနဲ့ မကျြနှာမကနျြ ခန်ဓာကိုယျ အနှံ့ အိပျရာမဝငျခငျ ပှတျလိမျးပေးပါ။ မနကျကမြှ ရခြေိုးပေးပါ။ အရပွေားကို တောကျပွောငျရှနျးလဲ့စပွေီး နူးညံ့စပေါတယျ။
အိပျရတာ စေးထနျးထနျးနဲ့ မအိပျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ရခြေိုးတဲ့အခါမှာ ခြိုးမယျ့ရထေဲ သံပုရာရညျတဈခှကျတဈဝကျခနျ့ ထညျ့ပွီး အဲဒီ့ရနေဲ့စိမျခြိုးပေးပါ။
သံပုရာသီးစိတျ (သို့) သံပရာရညျကို ရထေဲရောပွီး လကျကိုစိမျပေးပါ။ လကျသညျးမှာ ပနေတေဲ့ အစှနျးအထငျးတှကေို ခကျြခွငျးခြေ ခြှတျပေးသှား ပါလိမျ့မယျ။ပွီးသှားရငျ လကျသညျးကို ပွနျဆိုးမယျဆိုရငျလညျး ပိုပွီးတောကျပွောငျလာပါလိမျ့မယျ။
သံပုရာရညျထဲ လကျသညျး ခွသေညျးကို ဆယျမိနဈခနျ့ စိမျပေးပါ။ ပွီးလို့ရှိရငျ ဘရကျရျှနဲ့ လကျသညျး၊ ခွသေညျးကို ပွနျပှတျတိုကျပေးပါ။ ပွီးမှ ရနှေေး နှေးနဲ့ ဆေးကွောပေးပါ။ ဒီနညျးဟာ လကျသညျးကို သနျစှမျးစပွေီး တောကျပွောငျစပေါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဗငျနီဂါဖွူ ဇှနျးဝကျခနျ့နဲ့ရနှေေးတဈဝကျတို့ ရောပွီး ဘရကျရျှနဲ့ တိုကျပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
သံပုရာရညျတဈခှကျစာ (ကျောဖီခှကျတဈခှကျစာ)၊ သဈဂပြိုး(အနံ့အတှကျ)၊ သံလှငျဆီ နှဈဇှနျး (စားပှဲတငျဇှနျး)၊ နှားနို့လေးပုံတဈပုံ (ခှကျတဈခှကျ)၊ ရသေနျ့ (ရကေို သငျ့တျောသလို ထညျ့နိုငျပါတယျ၊ အနညျး၊ အမြား အရေးမကွီးပါ) တို့ရောစပျပေးပါ။
တကယျလို့ သဈဂပြိုး မသုံးခငျြဘူးဆိုရငျ တခွားအနံ့ ပစ်စညျးတို့ သုံးနိုငျပါတယျ။ နှငျးဆီပှငျ့ခပျြ တို့ဖွငျ့လညျး အစားထိုး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အားလုံးရော စပျပွီးရငျတော့ အဲဒီ့အရညျကို ခွထေောကျစိမျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးသှားမှ ရနေဲ့ ဆပျပွာ (Mild) နဲ့ သခြောဆေးကွောသနျ့စငျပေးပါ။
တဈပတျလောကျလုပျကွညျ့လိုကျတာနဲ့ ခွထေောကျ အသားအရဟော သိသိသာသာခြောမှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
*နှအေပူမှာ ခြှေးစုနခွေငျးအတှကျ အကောငျးဆုံးသဈသီး*
ပူပွငျးခွောကျသှတေဲ့နှရောသီလို ဥတုမြိုးမှာ ခြှေးထှကျသကျသာအောငျပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ရငျပူသကျသာအောငျလုပျဖို့ပဲ ဖွဈဖွဈ သံပုရာ သီးရညျကို ပြားရညျတဈဇှနျးနဲ့ရောပွီး သောကျပေးပါ။ သှေးလလေညျပတျမှုကို ကောငျးမှနျစရေုံမြှမက ခြှေးထှကျခွငျးကိုလညျး သကျ သာစပေါတယျ။ သံပုရာသီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ဂလူးကိုဈ့နဲ့သတ်တုဓာတျတှကွေောငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို ခြှေးထှကျခွငျးမှ ကာကှယျပေးတဲ့အပွငျ အေးမွအောငျလညျး စှမျးဆောငျပေးပါတယျ။
၁။သံပုရာရညျကို သောကျခွငျးအားဖွငျ့ မောပနျးနှမျးနယျမှုကို ပွစေပွေီး လူ၏ ခန်ဓာကိုယျတှငျ ဖွဈပှားတတျ သော အထူးသဖွငျ့ ဝမျးဗိုကျတှငျ ဖွဈပျေါတတျသော ရောဂါမြားကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ၊
၁၄။ သံပုရာခေါကျ ၅ ကပျြသား၊ ရေ ၇၅ ကပျြသားနှငျ့ ထကျဝကျခနျ့ ကြို၍ တခှကျစာ (၂ ကပျြသားခနျ့မြှ) တနေ့ ၂ ကွိမျ သောကျပေးပါက မပွတျနိုငျသော အဖြားရောဂါမြား ပွတျသှားနိုငျသညျ။
၁၅။ အစာမကွေ၊ လထေိုး၊ လအေောငျ့၊ လပွေညျ့ ဖွဈနခေဲ့သျော ဂငျြးခွောကျမှုနျ့ ၂ ပဲ၊ သိန်ဓော ၄ ပဲကို အမှုနျ့ထောငျး၍ သံပုရာရညျနှငျ့ ဖြျောကာ တနေ့ သုံးကွိမျ သောကျပေးပါက ပြောကျကငျးစနေိုငျသညျ။
၁၆။ သံပုရာဖြျောရညျ ခြိုခြိုကို သောကျပေးခွငျး၊ သံပုရာရညျ နှငျ့ ဆားမီးဖုတျကို လကျြပေးခွငျးဖွငျ့ နှလုံးတုနျခွငျး၊ ရငျ ခုနျခွငျး၊ မူးဝေ မောပနျးခွငျး မြားကို သကျသာပြောကျကငျးစသေညျ။
၁၈။ ခေါငျးတှငျ ပေါကျတတျသော ဒကျမြား၊ ဘောကျမြား ရှိနပေါက သံပုရာသီးအခှံနှငျ့ ခေါငျးကို ပှတျတိုကျပေးရပါမညျ။ ယားယံသော နရောမြားကိုလညျး ပှတျတိုကျနိုငျပွီး အမြိုးသမီးမြားအတှကျ သံပုရာသီးအခှံကို ခေါငျးလြျောရညျတှငျ ထညျ့ ကာ ခေါငျးလြျောနိုငျပါသညျ။
၁၉။ သံပုရာအစကေို့ ကွိတျကာ ခကျြမှာ အုံပွီး ၎င်းငျးအပျေါ၌ ဆနျဆေးရညျကို အနညျးငယျ ဆှတျဖွနျးပေးပါက ဆီး ရှငျစပေါတယျ။
၂၀။ သံပုရာခဉျြ ပွုလုပျ၍ ထမငျးစားတိုငျး စားသုံးပေးပါက လကွေောငျ့ဖွဈရသော သှကျခြာပါဒ၊လေငနျး၊ လထေိုး၊ လအေောငျ့၊ အစာအိမျရောဂါ မှနျသမြှကို ကာကှယျနိုငျသော အထူးစိတျခရြသော အာဟာရ တဈမြိုး ဖွဈပါသညျ။
( ကွညျကွညျခငျ၊ တိုငျးရငျးဆေး )
စာရေးသူ အထငျတော့ သံပုရာသီးဟာ ဝမျးဗိုကျနဲ့ ပကျသကျတဲ့ ရောဂါမှနျသမြှ၊ လနေဲ့ ပကျသကျတာ မှနျသမြှကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ၊ သူ့ရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကို မမွငျမိသလိုပဲ၊ ခြှငျးခကျြအနနေဲ့ တနကေို့ ( ၃ ) လုံးထကျ ပိုစား မိရငျ တော့ အစာအိမျ အခဉျြပေါကျတဲ့အနာမြိုး ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ၊
ရှေးရှေးသော ဆရာတျောကွီးမြားကတော့ ညနပေိုငျးမှာ သံပုရာသီး( ၁) လုံးနှငျ့၊ ပြားရညျ ထမငျးစားဇှနျး ( ၃ ) ဇှနျးလောကျကို ဖနျခှကျကွီး တခုထဲမှာ ထညျ့ပွီး ရနှေေးအဖွူနှငျ့ သမအောငျ မှကော သကွားအနညျးငယျထညျ့ပွီး သောကျလရှေိ့ခဲ့ကွတယျ၊ ရောဂါ မြိုးစုံကို ကာကှယျနိုငျသလို၊ ညနပေိုငျးမှာလညျး ဗိုကျမဆာတော့ဘူး၊ သံပုရာက လကေို နိုငျသလို ပြားရညျကလဲ ဝမျးတှငျးကလီစာမြားကို ဆေးကုပေးတတျတယျ၊ စားကောငျး အိပျပြျော၊ ဆီးမှနျ ဝမျးမှနျ ဖွဈပွီး လူကိုလဲ ဝဖွိုးစတေယျ။ အသားအရကေိုလညျး ကွညျလငျစတေယျ။
အထူးသဖွငျ့ အစာအိမျ သမားမြားအတှကျ ပြားရညျဟာ အသငျ့လြျောဆုံး ဆေးကောငျးပါ၊ ပြားရညျက အစာအိမျ နာကွောငျ့ အစာအိမျနံရံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အနာမြားကို ကကျြစပေါတယျ၊ စတုမဓူဟာလဲ အစာအိမျအတှကျ တျောတျော ကောငျးမှနျ တဲ့ ဆေး စှမျးတလကျပါပဲ။
ဒီနရောမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပိနျ လှနျးလို့ စိတျညဈနသေူမြား၊ ဝခငျြသူမြား အထကျပါနညျးကို ပုံမှနျလေး သောကျပေး ကွညျ့ပါ၊ မယုံမရှိပါနဲ့၊ ကိုယျတှပေ့ါပဲ၊ စာရေးသူ မွနျမာပွညျမှာ ရှိနစေဉျက ညနပေိုငျးမှာ အထကျပါနညျးကိုပဲ စှဲစှဲမွဲမွဲ သောကျလာပွီး ၂ လလောကျလဲ နရေော၊ ခန်ဓာကိုယျပေါငျခြိနျက ( ၂၀ ) လောကျ တကျလာလို့ ဆကျမသောကျ ရဲတော့ဘူး၊ အစား လြော့ စားပေး ရငျတော့ ကိုယျအလေးခြိနျ သိပျမတကျနိုငျပါဘူး၊ဝနသေူကို ပိနျစသေညျ…..။
ဝလှနျးလို့ ပိနျခငျြသူမြားကတော့ ပြားရညျ နှငျ့ မသောကျပဲ သံပုရညျသကျသကျ သောကျတာ ကောငျးပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ သံပုရာရညျသောကျပွီးလငျြ ဝမျးဗိုကျအတှငျးက ဟာနတေဲ့ အတှကျ ညနစောကို ဝိတျခတြာကို သတိမပွေီ့း စိတျကွိုကျ စားလရှေိ့ကွပါတယျ၊ အဲဒီမှာ ဘရိတျမရှိလတေော့ ခန်ဓာကိုယျက ပိနျမလာပဲ ဝမွဲ ဝနတော မြိုးဖွဈ တတျ ပါ တယျ၊ အဲဒီလို အစား မလြော့လငျြလညျး စားလိုကျသမြှ အာဟာရက ခန်ဓာကို အကြိုးပွုစတောမို့ သတိထားစရာပါပဲ၊ အထူးသဖွငျ့ သံပုရာရညျ သောကျထားလတေော့ ဝမျးဗိုကျက ရှငျးလငျးထားသလို ဖွဈပွီး ပိုစားနိုငျလာတတျတယျ၊ ဒါဆိုရငျတော့ ရညျရှယျ ခကျြပွညျ့ဖို့ ခဲယဉျးသှားပါလိမျ့မယျ၊
အခုခတျေပျေါနတေဲ့ ပိနျဆေးတှကေ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ အမြားကွီး ရှိတာကို ဆရာဝနျတိုငျးက ထောကျခံထားကွပါတယျ၊ သံပုရာကတော့ မရှိသလောကျပါပဲ၊ သံပုရာကို လိုသလို အသုံးခနြိုငျကွ ပါေ စ လို့ တငျပွရငျး ..
ရောကျလရောတှငျ သံပုရာ ဆောငျထားလငျြ ကမ်ြမာပကတိ ခမျြးသာစှာ ရှိနိုငျပါကွောငျး စတေနာစကား ပါးလိုကျ ပါရစတေော့…
မိနျးခလေးဘဲဖွဈဖွဈ ယောင်ျကြားလေးဘဲဖွဈဖွဈ… အလှအပကို မွတျနိုးတတျကွတာ… သဘာဝပါ… ဒါ့ကွောငျ့ ဗိုကျခေါကျထူ/ဗိုကျပူပွီး အဆီ မြားနသေူတှအေတှကျ… လကျတှေ့… ၇ ရကျအတှငျး… သိသိသာသာ ဗိုကျခပျြပွီး အဆီကစြတေဲ့ဆေးနညျးလေးကို မြှဝလေိုကျပါတယျ…
ဆေးနညျးက အလှနျလှယျပွီး အကုနျအကလြညျး အလှနျသကျသာပါတယျ… အိမျမှာရှိတတျတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှကေို ရောစပျပွီး အသုံးပွုရမှာပါ..
ပါဝငျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေတော့… သံပုရာသီး၊ အုံးဆီ၊ ဆေးပူ(ဒဏျကွလေိမျးဆေး) တို့ကို တဈခါလိမျးရုံ… ရောစပျပွီး လိမျးပေးရမှာပါ…
သံပုရာသီး တဈလုံးရဲ့ ၅ ပုံ တဈပုံလောကျကို လှီးပွီး… အကွမျးပုဂံလုံးထဲကို အရညျညှဈပါ…
အကွမျးပုဂံလုံးထဲသို့ အုံးဆီ သုံးလေးစကျလောကျ ထညျ့ပေးပါ… ထို့နောကျ …. ဂဠုနျရာဇာ/မိဂသီ/ရှမျးရိုးမ/လငျဇီး(လိမျးထညျေ့ဆး)တဈ မြိုးမြိုးကို တဈခါလိမျးစာ အနတေျောထညျ့ပွီး… မှပေေးပါ…
ဆေးကို ရငျခေါငျးမှ ဝမျးဗိုကျသို့ အထကျမှအောကျသို့ ဆှဲခပြွီး အသားထဲစိမျ့ဝငျအောငျ ပှတျလိမျးပေးပါ… ခါးတှငျအဆီရှိပါက ခါးမှ ခကျြသို့ ပှတျလိမျးပေးနိုငျပါတယျ…
တဈပါတျအတှငျး သိသာစှာ… ဗိုကျခပျြလာသညျကို… လကျတှေ့… တှမွေ့ငျ ခံစားရမှာပါ…
မှတျခကျြ- ညစာကို ပုံမှနျ ထကျ… လြှော့စားပေးရငျ… ပိုပွီး သိသိသာသာ ဗိုကျခပျြစပေါတယျ…တဈပါတျအတှငျး သိသိသာသာ အဆီနှငျ့ အခေါကျမြား လြှော့ကသြှားမှာဖွဈပါတယျခငျဗြာ
Categories ကျမ္မာရေး ဗဟုသုတ Post navigation
သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ..
ဖိုးချစ် ကောင်မလေး ကိုဗစ်ပိုး ကူးစက် ခံရ ကိုဗစ် နဲ့​ သေဆုံးသူ မိသားစု ဝင်တွေ နဲ့ တခန်းထဲ ကျူဝင် မိလို့